भिडे बलिउडका दुई वरिष्ठ अभिनेता,... :: एजेन्सी :: Setopati
भिडे बलिउडका दुई वरिष्ठ अभिनेता, एउटाले 'जोकर' भन्दा अर्कोले भने 'नसेडी'
एजेन्सी मुम्बई, माघ ९
भारतमा हालै जारी नागरिक्ता सम्बन्धी कानुनलाई लिएर बलिउडका दुई वरिष्ठ अभिनेताहरू एकअर्काविरुद्ध उत्रेका छन्।
हालैको एक अन्तरवार्तामा अभिनेता नसुरुद्धिन शाहले अभिनेता अनुमप खेरलाई 'चाप्लुस' र 'जोकर' भनेपछि खेरले त्यसको जवाफमा शाहलाई 'नसेडी' भनेर फर्काएका छन्।
मोदी सरकारले ल्याएको नागरिक्ता कानुन र काम कारवाहीको समर्थन गर्दै आइरहेका अनुपमले शाहको सो टिप्पणीमा जवाफ दिएका छन्।
'महाशय नसीरुद्दीन शाह साहेबलाई मेरो मायाले भरिएको संदेश छ। उहाँ उमेरमा म भन्दा ठूलो हुनुहुन्छ, उमेरमा पनि र अनुभवमा पनि। मैले सदैव उहाँको कलाको सम्मान गर्दै आएको छु र गरिरहनेछु। तर कहिलेकाँही केही कुराको भने जवाफ दिनु जरुरी हुन्छ।', बुधबार एक भिडियो ट्वीटमा अनुपमले भनेका छन्।
उनले सो भिडिओमा शाहलाई 'कुन्ठित' भनेर सम्बोधन गरेका छन्।
भिडिओमा यस्तो भनेका छन् अनुपमले?
'शाह साहेब,मेरो बारेमा दिनुभएको अन्तरवार्ता हेरें। तपाईंले मेरो तारिफमा म जोकर हुँ, मलाई गम्भीररुपमा लिनुहुँदैन, म चाप्लुस छु, यो सबै मेरो रगतमा छ, आदि इद्यादी भन्नुभएछ। तारिफका लागि धन्यवाद तर म तपाईं र तपाईंको कुरालाई अलिकति पनि गम्भिरताका साथ लिन्न', अनुपमले भिडिओमा जवाफ दिदैं भनेका छन्, 'हुन त मैले तपाईलाई नराम्रो कहिले पनि भनेको छैन तर आज भन्छु। यति धेरै सफलताका बाबजुत तपाईंको पूरा जीन्दगी कुन्ठामा नै सकिएको छ। यदि तपाईले दिलिप कुमार, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शाहरूख खान, विराट कोहलीलाई दोषी भन्न सक्नुहुन्छ, उनीहरुको आलोचना गर्नसक्नुहुन्छ भने मलाई विश्वास भयो, म पनि ठूला मान्छेमा पर्नेरहेछु।'
'उहाँहरुमध्ये कसैले पनि तपाईं टिप्पणीलाई गम्भिरताका साथ लिनुभएन किनभने सबैलाई तपाईं कुन पदार्थको सेवन गर्नुहुन्छ, थाहा छ। त्यसको कारणले के सही हो के गलत हो तपाईंलाई थाहा हुँदैन। मलाई नराम्रो भनेर तपाईं एक-दुई दिन चर्चामा आउनुहुन्छ भने म तपाईंलाई त्यो खुशी भेट गर्छु। भगवानले तपाईंलाई खुशी राखुन्। तपाईंको शुभचिन्तक अनुपम। र तपाईलाई थाहा छ मेरो रगतमा के छ? मेरो रगतमा हिन्दुस्तान छ। बस! यसलाई बुझिदिनुहोस्। जय होस।'
खेरको यो भिडिओ सार्वजनिक भएसँगै ह्यासट्याग नसुरुद्दिन शाग बुधबारदेखि भारतमा चल्तीको ट्रेन्ड भएको छ।
शाहले के भनेका थिए?
नसीरुद्दिन शाहले हालै 'द वायर'लाई दिएको अन्तरवार्तामा देशको वर्तमान अवस्था र त्यसमा सिनेमा जगतको रवैयामाथि टिप्पणी गर्दै सिधैं अनुपम खेरमाथि प्रहार गरेका थिए।
अन्तरवार्तामा शाहलाई 'देशको विभाजनकारी राजनीतिमा सिनेमा जगतका मानिसहरुको प्रतिक्रिया दिरहेका छन् जसमा सरकारको नीतिको समर्थक पनि छन?' भनेर सोधिएको थियो।
यो प्रश्नको बीचमा नै शाहले 'यसमा विरोध गर्नेहरुभन्दा समर्थन गर्ने मानिसहरु एकदमै कम छन्' भनेर जवाफ दिएका थिए।
त्यसपछि पत्रकारले 'यस्ता मानिसहरू(सरकार समर्थक) खुलेर आफ्नो कुरा राखिरहेका छन् नी?' भनेर सोधेको प्रश्नको जवाफमा शाहले 'यस्ता मान्छे ट्विटरमा खुब बोल्छन्। म ट्वीटरमा छैन र म चाहन्छु कि यी मानिसहरूले केमा विश्वास गर्छन त्यसको निर्क्योल गरुन्?' भनेर दिएका थिए।
यही जवाफमा उनले अनपमको खेरको नाम लिएका थिए।
'ट्वीटरमा बोल्नेहरूमा अनुपम खेर जस्ता मानिसहरु सामेल छन् र मलाई लाग्छ उनीजस्ता मान्छेलाई गम्भिर रुपमा लिन हुँदैन। ऊ एउटा जोकर हो र उनका एनएसडी र एफटिटिआइका सहपाठीहरु उनको चाकरी गर्ने बानीको साक्षी बयान दिन सक्छन्। यो उनको रगतमा छ, यस्तोमा उनी केही गर्न सक्दैनन्।'
'र ती मानिस जो विरोधमा छन् उनीहरूले आफूले के भन्न चाहेको हो, त्यसको निर्क्यौल गर्नुपर्छ।। हामीलाई हाम्रो जिम्मेवारी के हो उनीहरुले भन्न पर्दैन, हामीलाई हाम्रो जिम्मेवारी के हो राम्रोगरी थाहा छ', सो अन्तरवार्तामा उनको जवाफ थियो।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ ९, २०७६, १०:४१:००